Heano gumi Nzira dzaunogona Kuwedzera Kubatanidzwa neZvino Zviratidzo | Martech Zone
Muvhuro, June 28, 2021 Chitatu, October 13, 2021 Douglas Karr
Zano rakakosha mukugadzirisa kwedu uye kusangana kwemagariro kwave kungo tarisa pane zvinoonekwa zvemukati. Kugovera mhando infographics pane yedu saiti kwakwirisa kusvika kwedu uye kunondibvumidza kuti ndikurukure zvirimo mavari nemugove wega wega. Iyi infographic kubva kuCanva haina kumbosiyana - kufamba munhu nenzira dzese dzakasiyana dzaungaite zviratidzike. Uye ini ndinotenda chaizvo chidimbu chakakosha chezano ravanopa.
Zvemukati mekutarisa zvinokupa mahara kutonga kuti ushandise meseji yako, shandisa matekinoroji akasiyana uye masvikiro kuti meseji yako iyambuke, chishandiso chinonyanya kubatsira.
Kusiyanisa kwakadai kiyi online. Sezvatinonyora chinyorwa mushure mechinyorwa, isu tinofanirwa kushanda nesimba kwazvo pakuisiyanisa kubva kuzviuru zvezvimwe zvinyorwa zvinoburitswa zuva rega rega pawebhu. Wedzera imwe kiyi inoonekwa, hazvo, uye chinyorwa chinotora chimiro chitsva nevashanyi vako. Kwete izvozvo chete, iyo kugoverana yechinyorwa ichocho inowedzera zvakanyanya.
Mune ino infographic, Canva inokuratidza iwe 10 Mhando dzeAwesome Visual Zvemukati brand yako inofanirwa kunge ichigadzira izvozvi:
Meso-Achibata Mifananidzo - 93% yevatengi vanoti mifananidzo ndiyo # 1 yekusarudza chinhu pakutenga zvigadzirwa.
Kufuridzira Quote Makadhi - Makotesheni anoratidza hunhu hwako, zviri nyore kugadzira, uye anogoveranwa zvakanyanya.
Kusimba Kwakasimba Kuita Chiito - 70% emabhizinesi anoshaya chero kufona kuti chiitwe kunyangwe vaoni vane mukana wekuita.
Mifananidzo Yakapiswa - Kushandisa yakadzama uye yakamisikidzwa mifananidzo inogona kubatsira iwe kuwana 67% yakawanda vateereri kutariswa.
Inonakidza Dhata Kuona - 40% yevanhu vanopindura uye vanzwisise ruzivo rwekuona zvirinani pane zvinyorwa zvakajeka.
Kuita Vhidhiyo - 9% chete emabhizimusi madiki anoishandisa, asi 64% yevatengi vanofarira kutenga mushure mekuona vhidhiyo.
Matipi, Tricks, uye Sei-Ku's - Inopa kukosha uye kushandisa kwechigadzirwa chako uye kunobatsira kuvaka chiremera.
Inodzidzisa Screenshots - 88% yevanhu vanoverenga wongororo kuti vaone bhizinesi 'mhando, tora skrini yewongororo dzako!
Pfungwa Dzinomutsa Mibvunzo - Inokurudzira kugovana, kutaurirana, kuita pamwe nekuziva mhando.
Infographics - Pane chikonzero nei Highbridge inogadzira akawanda infographics kune vatengi vedu! Ivo vari katatu zvakapetwa mukana wekugovaniswa uye mabhizinesi vachishandisa infographics mushumo 3% yakakwira purofiti pane avo vasingadaro.
Kuzivisa: Ini ndiri mubatanidzwa we Canva uye ndiri kushandisa yangu yakabatana link mune ino chinyorwa.
Tags: vakapiswa mifananidzocanvamavhidhiyo anobatasei-kutiinfographicinfographicsmifananidzomifananidzomibvunzomakadhi ekutorascreenshotsmazanomhando dzezvinoonekwa zvemukatimavhidhiyomifananidzo inoonekwa
Chinyorwa chakanaka uye infographic. Zvemukati Zvekuona uye zvekudhinda zvinhu zvinokanganisa zvakanyanya kuendesa yedu bhizinesi meseji kune vamwe.